Samsung Odyssey G7: Nyocha egwuregwu zuru oke | Akụkọ akụrụngwa
Samsung Odyssey G7: Nyochaa egwuregwu zuru oke
Miguel Hernandez | 21/04/2021 18:00 | General, Nyocha
Ná ngwụsị afọ gara aga ụlọ ọrụ South Korea gosipụtara usoro ngwaahịa egwuregwu na ọkachasị nso Odyssey, meziri maka nzube a nke ụlọ ọrụ ahụ gosipụtara maka ndị ọrụ iji nweta ihe ọ theụ theụ niile na egwuregwu vidio ha.
Nke a na oge anyị nwere na ule table ọhụrụ Samsung Oddysey G7, ihe nlere di elu nke emeputara nke oma. Choputara n’ime anyi nyocha miri emi ya ma mara uru izuru gi. Anyị na-agwa gị ihe anyị chere na ihe ikpeazụ si na nyocha anyị bụrụ.
1 Nzube na ihe: Ebumnuche maka "egwuregwu"
2 Njirimara tebụl
3 Nhazi na njikọta
4 Jiri ahụmahụ na ọnụego
Nzube na ihe: Ebumnuche maka "egwuregwu"
N'ikwu eziokwu, omume ịgbakwunye ọtụtụ ndị RGB LEDs na ihe niile chọrọ ịbụ "egwuregwu" bụ ihe na-adabaghị m ọkachasị, ọ masịrị m ịmegharị uche. Agbanyeghị, Samsung jisiri ike kwado echiche a na-enweghị oke ọfụma na nke ahụ juru anyị anya. Anyị na-amalite site n’iburu n’uche otu n’ime akụkụ ya kachasị dị iche iche, ntụgharị 1000-millimita nke bụ okwu kachasị elu n’usoro nke ndị nlezianya curved. Nke a bụ na mgbakwunye na mbelata akụkụ na bezels dị elu yana imewe ihe ike na ala, nke abụọ RGB LED mebere na njedebe ọ bụla.
Ibu ibu ngụkọta: 6,5 N'arọ
Akụkụ ọkpụrụkpụ ntọala: 710.1 x 594.5 x 305.9 mm
Na mgbidi azụ anyị nwere nkwado a wuru nke ọma nke nwere onye na-ebufe eriri, yana ihe mgbanaka RGB LED ọzọ, nke ahụ nwere mkpụbelata nke ga-eme ka ọkụ ghara inwu. Nke a ga-abụ ezigbo ọchịchịrị n'ọnọdụ niile ma hụkwa ọfụma mgbe anyị na-ekwu maka iji ya kpamkpam n'ọchịchịrị, ọ ga-abụ ikpe nke a ga-egosipụta na mgbidi ahụ. Ntọala ahụ nwere ike idozi n'ogo ruo 120 centimeters ma nwee ike: tilt n'etiti - 9º na + 13º, gbanwee - 15º na + 15º na pivot n'etiti -2º na + 92º. Ihe nlere bu nke eji ihe eji eji oji mee ihe eji eme ya ka o sie ike.
Anyị na-amalite, n'ụzọ doro anya, na ngalaba nyocha ahụ nke nwere ike bụrụ ihe kachasị mkpa n'etiti ọtụtụ ngwa ọrụ. Anyị nwere ụdị 31,5-anụ ọhịa VA panel na a 16: 9 akụkụ ruru dịkarịsịrị. Ihe ngosi VA a na ihe ngosi ya dị oke egwu na-eme ka ọ nwee obi ụtọ na ịma mma ya kachasị mma mgbe anyị debere onwe anyị nke ọma n'ihu ya, anyị ga-echefu iji ya site na akwa ma ọ bụ site na isi ndị na-abụghị isi. Na nyocha a, Samsung ahọrọla QLED, teknụzụ rụzuru ọtụtụ ihe ịga nke ọma.
Mkpebi nyocha nke onye nlele ahụ bụ 2560 x 1440 pikselụ, Nke ahụ adịghị njọ ma ọlị ka ị nwee ike ịnụ ụtọ egwuregwu PC na-esote ọgbọ, yana ndakọrịta zuru oke na ngwaọrụ dịka PlayStation 5. Anyị nwere n'oge a nchapụta nchapụta nke 350 cd / m2 nke kachasị nke 600 cd / m2 na isi ihe. Nkọwa dị iche ruru 2.500: 1 na anyị anaghị achọsi ike, ee, mmekọrịta nke panel ga-agbanwe na NVIDIA G-Sync na AMD FreeSync ndakọrịta.
Dynamicdị dịgasị iche iche ọ na-enye, n'ọnọdụ gị HDR600 A ghaghi ikwu na anyị ahụbeghị ya nke ukwuu. Ume ume ọhụrụ, ee, bụ nke kachasị elu na ahịa na-enweghị mkpuchi, na-eru 240 Hz. N'aka nke ọzọ, na 240 Hz anyị nwere ike iji ya naanị omimi dị omimi nke 8 bits, anyị ga-agbada maka ịdị umeala n'obi 144 Hz iji nwee ọfụma 10-bit. N'akụkụ aka nke ọzọ.
Nhazi na njikọta
Ileba anya a nwere integrated software ka ejiri ya joystick na ala mee ihe. N'ime ya anyị ga-achọta ntọala ma n'ogo nke njikọta na nhazi, agbanyeghị na ahụbeghị m ha nke ukwuu. Anyị nwere ike ijikwa nsogbu ọnụego dị n'etiti ndị ọzọ. N'ime ya anyị ga-ahụ n'oge na-adịghị anya "impu-tlag" na n'ọnọdụ ọbụla, ọ ka dịrị na 1ms opekata mpe n'ule anyị.
Na-aga n'ihu na njikọta, anyị ga-achọta ọdụ ụgbọ mmiri USB 3.0 nke nwere ọkọlọtọ, ọdụ ụgbọ mmiri USB Hub ma ọ bụrụ na anyị chọrọ itinye ụdị mgbakwunye mgbakwunye na-atọ ụtọ karị, yana ọdụdụ DisplayPort 1.4 abụọ na ọdụ ụgbọ mmiri HDMI 2.0. Gaghị agbaghara ihe ọ bụla, belụsọ na ị na-achọ ụda, ị ga-enwe npụta isi okwu ma chefuo ndị ọkà okwu. Maka nkọwa zuru ezu, Site na itinye naanị ọdụ ụgbọ mmiri HDMI anyị nwedịrị ike ịchọta ụfọdụ snag mgbe ị na-agbakwunye ogwe ụda iji meziwanye ahụmịhe anyị n'ozuzu.
Jiri ahụmahụ na ọnụego
Site na ihe dị egwu anyị na - anụ ụtọ oge niile. N'ọnọdụ a, akụkụ ya dị elu bụ ịhụ n'anya ma ọ bụ ịkpọ mmadụ asị. Ntugharị 1000R na nleba anya dị otú ahụ nwere ezi uche, ọ bụ ezie na ọ nweghị onye nwalere ya ruo ugbu a. Ihuenyo a na-ekpuchi anyị kpamkpam ma weghara ọtụtụ ebe anyị na-ahụ anya, nke a nwere uru doro anya karịa igwu egwu. The mbụ echiche mgbe a mbụ na kọntaktị na ileba anya bụ otu n'ime ezi anya, -agaghị ekwe omume anya.
Na-eme ya ngwa ngwa, karịsịa mgbe ị ga-eji ya na-egwu egwu. Mgbe ị na-ezube iso ya rụọ ọrụ, ihe gbanwere, otu a ka ọ dị n'ihi nke a, agbakwunyere ya radikal curvature, nke bụ kama nnọọ vasatail egosi, nke ukwuu e mere maka nzube ya, «gaminggba Cha Cha». Mmikpu ahụ bụ nke zuru oke, mana emepụtara ya naanị maka ndị na-egwu egwuregwu. Agbanyeghị, ịnwe ọnụọgụ abụọ nke nha a na desktọọpụ yiri ka o siri ike, yabụ ị ga-edo anya gbasara ọnụego ị ga-akwụ mgbe ị kpebiri iji ya maka ebumnuche ndị ọzọ, n'ihi na ikiri ihe nkiri na ọnọdụ egwuregwu nwere ike ọ gaghị adị mma.
Mgbe anyị na-eme nyocha ahụ, anyị kwupụtara na Samsung ewepụtala ngwa ngwa maka ngwa nyocha ahụ, arụnyere nke a n'ụzọ dị mfe site na ọdụ ụgbọ USB ya ma nye ezigbo akara nkwado nke ọ nwere n'azụ. Agbanyeghị, ọnụahịa ahụ bụ ezigbo ara, naanị maka ndị chọrọ iji ike ha mee ihe n'okwu a,Samsung G7 (C32G73TQSU) ...
Nke a abụrụla nyocha miri emi nke Samsung's Odyssey G7, nyocha dị oke egwu na nke ukwuu maka ọtụtụ ndị egwuregwu, cheta na ị nwere ike ịhapụ anyị ajụjụ ọ bụla na igbe igbe.
Ihe na: 21 April 2021
Mgbanwe ikpeazụ: 18 April 2021
Ndakọrịta dị elu na ezigbo ume ume
Nkwado teknụzụ na nhazi dị mma
Ọtụtụ ọdụ ụgbọ mmiri ndị ọzọ na-efu efu
Onu ahia n'ime iru mmadu ole na ole
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Samsung Odyssey G7: Nyochaa egwuregwu zuru oke
Girlsmụ nwanyị Official na ICT Day: Anyị na Fran del Pozo na-akparịta ụka, site na Code.ORG
Roborock S7: Nhicha akwa dị elu ugbu a na ntanye ultrasonic